Nezvedu - Xinxiang Guta Chengxin Vibration Equipment Co, Ltd.
Xinxiang Guta Chengxin Vibration Equipment Co, Ltd.ari nyanzvi akaigadzira vibration michina uye kuchera michini mu China. Kambani yedu iri muXiaoji Economic Development Zone, Xinxiang Guta, Henan Province, inovhara nzvimbo yemamirimita mazana masere uye nzvimbo yekuvaka ye60,000 mativi emamirimita. Iyo kambani yakavambwa muna 2003 ine yakanyoreswa capital yemamiriyoni makumi mashanu emamiriyoni euan. Inobatanidza R & D, dhizaini, kugadzira uye kutengesa. Zvigadzirwa zvaro zvinoshandiswa zvakanyanya mukugadzira simbi, kuchera, marasha, makemikari, zvekuvaka, simba, mugwagwa uye bhiriji mainjiniya nemamwe maindasitiri. Parizvino, kambani yedu ine vashandi vanopfuura mazana mashanu uye vanopfuura makumi masere technicians. Kambani yedu haina kupihwa chete seyematunhu yepamusorosoro bhizinesi, AAA kiredhiti bhizinesi, purovhinzi chibvumirano uye rakavimbika bhizinesi neHenan Provincial department reSainzi neTekinoroji, asi zvakare yakapasa iyo ISO yemhando system chitupa uye inosungirwa CE certification yezvigadzirwa zvinoshandiswa mu iyo EU.
Chengxin Vibration ikozvino rave rekufananidzira bhizinesi muindasitiri uye yave ichizivikanwa nevatengi vatengi. Mumakore achangopfuura, kambani yakagadzira hukama hwakakura hwebhizinesi nemakambani esimbi esimbi, marasha, uye magetsi, akadai seWuhan Iron uye Simbi, Baosteel, Capital Iron uye Simbi, Jianlong Boka, Jiuquan Iron uye Simbi, Yanshan Iron uye Simbi, Ganglu , uye Hanye. Pamusoro pekupa makambani makuru epamba, Chengxin Vibration inotumirawo kuVietnam, Bulgaria, Abu Dhabi, Indonesia, Turkey, Botswana, Zambia, Cambodia, Guatemala nedzimwe nzvimbo. Iyo kambani yakagadzira yekutengesa uye yehunyanzvi sevhisi masevhisi munyika yese, ichigadzira yekutengesa network ine yakasimba simba yekuvandudza musika kugona uye yakakwana manejimendi manejimendi system.
Kwemakore, Integrity Vibration yakawana yakakwira mwero wekuita, otomatiki uye huchenjeri mukugadzirwa kwechigadzirwa uye kugadzirwa. Panguva imwecheteyo, yakagadza musika-wakatarisana kugadzirwa uye mashandiro manejimendi sisitimu iyo inovandudza mashandiro ezvigadziriso, kuyerera kwemari uye kuyerera kweruzivo, uye yakawana Makomborero akanaka ezvehupfumi. Ikozvino, iyo yakazara yekambani mabhenefiti mabhenefiti, kwesainzi uye tekinoroji kutsvagisa uye kusimudzira simba, uye chigadzirwa musika makwikwi ndevamwe vemberi vechipamba indasitiri.
Zvigadzirwa zvikuru zvakagadzirwa neChengxin Vibration zvinosanganisira zvikamu zvitanhatu: vibrating screens, ma conveyors, crusher, vibration motors, vibration exciters uye dzakasiyana zvigadzirwa zvigadzirwa zvikamu. Izvi zvigadzirwa zvakagadzira zvinopfuura makumi maviri akateedzana neanopfuura mazana mana maratidziro.
• Vibrating skrini: akawanda epamusoro-anoshanda masikirini, anoshanduka ekuchengetedza zvidzitiro, zvakatipoteredza zvine hushamwari feeder masikirini, denderedzwa kutetepa masikirini, mitsara inozungunusa masikirini, yakatetepa ruoko ruoko vibrating skrini, kutonhora / kupisa yangu mine vibrating skrini, oval yakaenzana-ukobvu masikirini, marasha poda skrini, roller skrini, Fertilizer screen, dewatering skrini, yakakomberedzwa skrini, sinusoidal skrini, CZS yakateedzana yekuzorora skrini, GTS yakateedzana dhiramu skrini.
• Feeder: CZG mhando yakapetwa-mashoma ichizunguza feeder, yemagetsi ichizunguza feeder, bhandi / cheni feeder, kudzosera marasha feeder, CYPB yakawanda dhisiki feeder, FZC akateedzera anotetepa emuchina wekuchera, Screw conveyor, cheni conveyor, vibration conveyor, bhandi conveyor, bhaketi erevheta.
• Crusher: mhete sando crusher, reversible crusher, cône crusher, rova ​​crusher.
• Spare zvikamu: imba yekuchengetera madziro vibrator, CJZ chigaro mhando vibrita chinonakidza, mutete mafuta vibrator marasha kabati, vibration mota, mbiri-axis vibrator, nezvimwe zvigadzirwa zvigadzirwa.
Kubva pakagadzwa, Kuvimbika Vibration kwagara kwakaisa tekinoroji kutsvagisa nekusimudzira munzvimbo yekutanga, uye panguva imwechete iri musika-yakatarisana uye inoshingairira inovandudza tekinoroji kutsvagisa nekusimudzira. Parizvino, Chengxin Vibration yakatwasanuka dhizaini uye yekutsvagisa Institute ine anopfuura makumi masinjiniya mainjiniya. Kuburikidza netekinoroji sumo uye tekinoroji shanduko, kambani yakasimbisa tekinoroji kubatana neanozivikanwa epamba mayunivhesiti uye yakagadzira bhizinesi tekinoroji yekutsvagisa nekusimudzira nzvimbo. Iyo kambani inoisa inopfuura gumi muzana muzana yemubhadharo wayo mune yesainzi nzvimbo yekutsvagisa gore rega, uye mari dzese dzinoshandiswa kugadzira tekinoroji, saka nzvimbo yekutsvagisa ine mari yakakwana.
Mumakore achangopfuura ezvakaitika zvebasa, zvakasanganiswa nehunyanzvi hwepamberi pamba nekune dzimwe nyika, Chengxin Vibration yakagadzira akawanda masisitimu epamusoro-anoshanda, anogadziridza masisitimu ane hushamwari, uye zvakatipoteredza zvine hushamwari feeder skrini inosangana nezvinodiwa mumusika. Panguva imwecheteyo, mifananidzo yese yekambani inotarisirwa nePMM data manejimendi manejimendi, iyo inoziva iro ruzivo rwekuchinjisa dhizaini, manejimendi, uye kugadzirwa, inovandudza mashandiro ekushanda kwebhizinesi, uye inomhanyisa kumhanya kwekugadzirwa kwechigadzirwa.
Kwemakore, kambani yakahwina rutsigiro uye kuvimba kwevatengi vazhinji zvinoenderana nebhizinesi tenet re "Bata vatengi nekutenda kwakanaka, nezvigadzirwa zvakakwana kuhwina kuvimba kwevatengi", zvigadzirwa zvakatengeswa munyika yese uye inotengeswa mhiri kwemakungwa, uye yakagamuchirwa nekubvumirana kurumbidzwa!
Kutendeseka kunovaka chiratidzo, hunyanzvi hunovaka ramangwana.
Kambani yemagariro mutoro
1. Kuitira hanya nzanga
• Govera zvinhu kunzvimbo inodiwa munguva yekudzorera kunzanga.
• Gadzirisa chikamu chechinetso chebasa.
2. Kutarisira nharaunda
• Chengetedza mari yakakura kusimudzira kusimudzira kwezvakatipoteredza. dziviriro tekinoroji, uye inobatsira mukuzadzikiswa kwekusimudzira kusimudzira.
• Pindura kukoka kwenyika kuti ushandise simba rakachena uye chengetedza zviwanikwa zvemunyika.
1. Tora 6S manejimendi manejimendi kuti uone kuti nzvimbo yekushanda ye. vashandi vakachena uye vanobudirira.
2. Simbisa kubatana nemayunivhesiti, uvandudze mhando yezvigadzirwa, uye chengetedza zvido zvevatengi.
3. Kugoverwa kwehutano hwevashandi panguva dzezororo.